शेरबहादुर देउवाले भने– शशांकलाई रेमडिसिभर औषधि चलाइएको छ, चाँडै निको भएर फर्कनेछन् Canada Nepal
बहराइनी राजपरिवारसहित आरोहण टोलीको खुम्बु आउने कार्यक्रम प्रभावित
शेरबहादुर देउवाले भने– शशांकलाई रेमडिसिभर औषधि चलाइएको छ, चाँडै निको भएर फर्कनेछन्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको स्वास्थ लाभको कामना गरेका छन् । कोरोना संक्रमण भएपछि कोइराला ॐ अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् ।
बिहीबार सभापति देउवाले पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलमार्फत डा. कोइरालाको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् । उनले ॐ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका डा. कोइरालाको स्वास्थ स्थितिमा क्रमिक सुधार भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले डा कोइरालाको निमोनियाको स्थिति नियन्त्रण हुँदै गएको र रेमडिसिभर औषधिको प्रयोगले स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गइरहेको जानकारी दिए । डा कोइरालाको अस्पतालमा भर्ना भएदेखि सभापति देउवाले नियमित चासो राख्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन् ।
साथै यसअघि बिहीबार बिहान भिडियो सन्देशमार्फत डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो चिन्ता नलिन शुभचिन्तकहरुलाई आग्रह गरेका थिए । साथै उनले दुई तीन दिनमै डिस्चार्ज हुने जानकारी गराएका थिए ।
पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव पौडलले जारी गरेको विज्ञप्तिः असोज १, २०७७
शीघ्र स्वास्थलाभका लागि
सभापति देउवाको महामन्त्री कोइरालालाई शुभेच्छा ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको स्वास्थ स्थितिमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । ॐ अस्पतालमा चिकित्सक टिमको संयोजन गरिरहनु भएका डा. विश्वनाथ कोइरालाका अनुसार निमोनियाको स्थिति नियन्त्रण हुँदै गएको छ र रेमडिसिभर औषधिको प्रयोगले उहाँको स्वास्थलाई सहज बनाइरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री कोइरालाको स्वास्थ बारे नियमित चासो राख्नु संगै यथासिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्नुभएको छ ।
चांडैनै स्वस्थ भएर फर्कन नेपाली कांग्रेस पार्टी परिवारका तर्फबाट हामी हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौं ।
आश्विन १, २०७७ बिहिवार १२:३०:१४ बजे : प्रकाशित